Wholesale Marine-Giredhi 600D 3 Bow Bimini Yepamusoro Kavha mune Yakasiyana Size yeBoats Manufacture and Factory |XGEAR
Screen House & Rooms
Denderedzwa Gym Bhora
Inotakurika Inflatable Simuka Paddle Board yevakuru...
XGEAR Pop Up Nyore Isa 6 padivi Hub Screen Imba /...
Vaviri Toni Captains Bucket Seat Flip up Boat Seat
XGEAR 2 mu1 Foldable Camping Lounge Chair ine Deta...
600D Mvura Isingapindiki Chikepe Chinotyaira Chikafu Chinokodzera V-Hull Tr...
8-ply Professional Heavy Battle Rope uye Weaving Rop...
Marine-Giredhi 600D 3 Bow Bimini Pamusoro Kavha mune Yakasiyana...
Chero kupi Tafura Tennis Sets ine Retractable Net
Deluxe Foldable Yakaderera Kumashure Boat Seat
XGEAR Padded High Back Foldable Camping Chair neC...
XGEAR Yakaderera Seat Yakareruka Kupeta Beach Chair ine ...
XGEAR Pop Up Canopy Tent 10′x10′, Nyore S...
Speed ​​​​Agility Training Set neTPE Ladder yekusimba...
XGEAR Yakareruka uye Yakasimba Pop Up Shower Tende Yakasiyana...
TPE Yoga Mat ine Carrying Strap fitness mat yeFlo...
Anti-Burst Fitness Bhora uye Yoga Bhora reKuekisesaiza, ...
600D 4 Bow Bimini Yepamusoro Kavha mune Akasiyana Ruvara ane...
Marine-Giredhi 600D 3 Bow Bimini Pamusoro Kavha mune Yakasiyana Size yeBoti
XGEAR 3 Bow Bimini Yepamusoro chivharo chinosanganisira kukwirisa hardware uye bhutsu yekuchengetera ine 1 inch aluminium furemu..Tine mhando mbiri dzeiyi marine-giredhi 600D 3 Bow Bimini Pamusoro, Model#1 ine 4 tambo dzinochinjika, Model #2 chete nemabhandi maviri ekumberi anochinjika uye mapango maviri ekumashure ekutsigira.Kune gumi akazara mavara akasiyana uye 6 akasiyana saizi yekusarudza kukwana akasiyana marudzi emabhoti.
Nguva Yekutungamira:35 ZUVA
Muripo:L/C, D/A, D/P, T/T
● Zvinyorwa:Boat Bimini top yakagadzirwa kubva kuMarine-giredhi 600D polyester canvas uye 600D mhinduro yakadhayiwa machira ane kaviri akaturikidzana.
● 1'' dhayamita aruminiyamu furemu ine kaviri-yakakomberedzwa makumbo makuru euta kuitira kusimba kukuru uye mahara ekukurumidza kuburitsa mamoiri.2 inogadziriswa tambo yenylon yekumberi uye 2 kumashure kwerutsigiro danda.
●Package:Tine mhando mbiri dzeiyi marine-giredhi 600D 3 Bow Bimini Pamusoro.Maviri acho anosanganisirwa ese asina Stainless simbi yekumisikidza Hardware, ruvara rwakarongedzerwa zippered yekuchengetedza bhutsu uye kuunganidza mirairo.Asi zvakasiyana ndezvekuti:
Muenzaniso #1: Ne 4 tambo dzinogadziriswa;
Muenzaniso #2: Iine 2 kumberi kunogadziriswa tambo uye 2 kumashure kwerutsigiro mapango.
Nzira yekuyera sei chikepe chako kusarudza saizi yakakodzera yeBimini kumusoro?
● 1. Kushandisa tepi chiyero uye sarudza urefu hupi huchapa pamusoro pehuwandu hunodiwa hwekuvhara mumvuri.
● 2. Nzvimbo yakakosha yekukwirisa ichave iri pakati penzvimbo yepamusoro parutivi rumwe norumwe rwechikepe chako.
● 3. Mushure meizvi, pima chinhambwe pakati pezvibodzwa izvi zvinosungirirwa ipapo unogona kuona hupamhi hwaunoda.
● 4. Paunenge wakamira mukati meigwa, pima kubva panzvimbo yakakosha yakananga kumusoro kuti uone urefu hwaunoda.
● 5. Tinokurudzira kuti usarudze hukuru hukuru kana hupamhi hwechikepe chako chawakayera huchingosvika pakukura zvakakosha kukosha.
Cherechedza: Bimini Pamusoro haifanire kuvhurika kana kumhanya kwechikepe chako kwapfuura 25 MPH!
Kuyera Bimini kumusoro
6'L x 46"H x 54"-60"W
6'L x 46"H x 61"-66"W
6'L x 46"H x 67"-72"W
6'L x 46"H x 73"-78"W
6'L x 46"H x 79"-84"W
6'L x 46"H x 85"-90"W
Moreiripo ruvara rwekusarudza:
Mifananidzo kubva kuongororo yevatengi
Zvakapfuura: Chero kupi Tafura Tennis Sets ine Retractable Net
Zvinotevera: 8-ply Professional Heavy Battle Rope uye Weaving Tambo Yekudzidzira Kurovedza
600D 4 Bow Bimini Yepamusoro Kavha mune Akasiyana Ruvara...
Nzira yekuzorodza tsandanyama Dzako Mushure meKutamba Kwepamusoro-Kusimba?
Sei uchifanira kudziya usati waita maekisesaizi?
Chii Chinobatsira Iyo Carver Bimini Pamusoro Inounza?
Gwaro Rakareruka reKuredza kubva muBoat
© Copyright 20102022 : All Rights Reserved. Hot Products Sitemap AMP Mobile